အောက်တိုဘာ ၄ ရက်အပတ်အတွက် Netflix သို့သွားမည် - BGR - TELES RELAY
Netflix သည်အောက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင်ပြသမှုအသစ်၊ ရုပ်ရှင်နှင့်အထူးအစီအစဉ်အသစ် ၁၅ ခုကိုဖြည့်စွက်သည်။
ယခုအပတ် Netflix သို့လာမယ့်မူရင်းအသစ်ပါဝင်သည် ဇု၏သွေး, ရာဝတီ, ဒီနေ့ညမှာဘယ်သူမှအိပ်မပျော်ဘူးနှင့်၏တတိယရာသီ Suburra.
Netflix ကရှုံးနေတယ် Ace ကို Ventura, The NeverEnding ပုံပြင်နှင့် သိုးသငယ်များ၏တိတ်ဆိတ်.
လွန်ခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကဂိမ်းကစားခြင်းကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်မထားခဲ့ပါ ဟေးဒီး။ ဂိမ်းထဲမှာမင်းဟာဒေးစ်ရဲ့သား Zagreus အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ပြီးမရဏာနိုင်ငံထဲကမင်းရဲ့လမ်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း Netflix တွင်ပြသပွဲအသစ်တစ်ခုကိုပြသနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဤအရာကိုယူဆောင်လာသည် ဇု၏သွေး, ဤအနှစ်ချုပ်ဖြစ်ပါသည်:
ရှေးဂရိနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သောသာမန်လူတစ် ဦး သည် Heron အားသူ၏ဇစ်ဇူး၏သားအဖြစ်အမွေအနှစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကမ္ဘာကိုနတ်ဆိုးတပ်မှကယ်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်အပတ်အတွက် Netflix ၏စီးဆင်းမှုနှင့်ထွက်ခွာမှုစာရင်းအပြည့်အစုံကိုဖော်ပြပါ။
အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 27th
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်
သောကြာနေ့၊ အောက်တိုဘာ ၉ ရက်
စနေနေ့၊ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်
တနင်္လာနေ့၊ အောက်တိုဘာ 26th
Ace Ventura: အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စုံထောက်
Charlotte ရဲ့ Web
အဆိုပါဖို့အတွက် Titans တွေကများတိုက်ပွဲဖြစ်
Dick & Jane နှင့်အတူပျော်စရာ
ကောင်းကင်မှအဝေးပြေး: ရာသီ 1-5
The NeverEnding ပုံပြင်
The NeverEnding ပုံပြင် ၂: နောက်အခန်း
အဆိုပါ Patriot ဒုံး
Pelham 123 ၏ယူခြင်း
မရဏာနိုင်ငံ: Lycans ၏ထ
Netflix မှရောက်ရှိလာသောထွက်ခွာခြင်းနှင့်ထွက်ခွာခြင်းများ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်အထူးအစီအစဉ်များကိုနောက်တစ်ပတ်ထပ်မံပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဤအတောအတွင်းထွက်စစ်ဆေးပါ အောက်တိုဘာလမှာ Netflix ကိုသွားမယ့်အရာအားလုံး, အဖြစ် Netflix ၏မူလရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲအားလုံးအတွက်ပြက္ခဒိန်ရက်စွဲ.
ဤဆောင်းပါးသည် https://bgr.com/2020/10/25/netflix-new-shows-movies-october-25-2020/ တွင်ပထမဆုံး (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်) ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။